अन्तरवार्ता – Himalaya TV
Home » Archive by category "अन्तरवार्ता"
यस्तो छ नारायण गोपालको लुकेका तथ्य र रक्सीको कथा ! (भिडियो)
१९ मंसिर २०७५, बुधबार १८:४८
काठमाडौं, १९ मंसिर । स्वरसम्राट नारायण गोपाल सांगीतिक यात्रामा एक महान् पुरुष भएको र उनको स्थान यो युगमा कसैले लिन नसक्ने वरिष्ठ गायिका लोचन भट्टराईले बताएकी छन् ।
काठमाडौं, १७ मंसिर । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार खुलेअाम धर्म प्रचारमा लागेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस अाज, नेपालमा पनि मनाईंदै
१६ मंसिर २०७५, आईतवार १०:३३
अन्तर्राष्ट्रिय दासता उन्मूलन दिवस अाज नेपालमा पनि बिबिध कार्यक्रम गरेर मनाईंदैछ । सन् १९४९ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको पहलमा डिसेम्बर २ तारिखमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । पछिल्लो समय नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य बेचबिखन जस्ता आधुनिक दासत्व बढ्दै गएको देखिएकाे छ। दास प्रथा घटे पनि मानव तस्कर, अङ्ग तस्कर र जबरजस्ती यौन व्यवसायमा लगाइने गरेको […]
भारतको खतरनाक अफरबारे बोले चित्रबहादुर: ओली फेल भए, सर्टिफिकेट दिन्न (भिडियोसहित)
६ मंसिर २०७५, बिहीबार १९:२८
काठमाण्डौ, ६ मंसिर । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी प्रावधान र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणबारे विभिन्न प्रस्ताव राखेको खुलासा गरेका छन् ।
६ मंसिर २०७५, बिहीबार १३:१९
काठमाण्डौ, ६ मंसिर । मिस वर्ल्ड २०१८ मा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेकी श्रृंखला खतिवडा प्रतिस्पर्धीमध्यकै उत्कृष्ट देखिएकी छिन् । विभिन्न चरणका प्रतिस्पर्धामा उनी अग्रस्थानमा देखिएकी हुन् । चीनको सान्या सहरमा जारी मिस वल्र्ड २०१८ मा एक सय २१ देशका सुन्दरीले सहभागिता जनाएका थिए । जसमा श्रृंखला उत्कृष्ट ३० मा छनोट भई अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेकी छिन् […]
काठमाण्डौ, १३ जेष्ठ । गैह्र अावासीय नेपाली (एनअारएन) का अध्यक्ष भवन भट्टले ८ महिनाभित्र लाप्राकको ५७४ घर र्निर्माण सम्पन्न गरी सरकारलार्इ हस्तान्तरण गर्ने र ६ महिनाभित्र संघको कार्यालय अाफ्नै भवनमा सार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाण्डौ, ७ जेष्ठ । वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री एवं नवगठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ९ सदस्यीय सचिवालय सदस्यमध्येको एक प्रभावशाली नेता रामबहादुर थापा बादलले पार्टी नेतृत्व र अन्य नेताहरूको भूमिकाको विषयमा कुनै समस्या नरहेको बताएका छन् ।
पल शाह र धमलामाथि आँचलको हमला, धमलालार्इ लगाइन् यस्ताे अाराेप
२१ माघ २०७४, आईतवार १९:४५
काठमाण्डाै,२१ माघ । नायिका अाँचल शर्माले नायक पल शाह र पत्रकार ऋषी धमलामाथि धमलाकाे शैलिमा हमला गरेकी छन् ।
सवल राष्ट्र, सुखी जनता र सफा वातावरण नेपाली युवाहरुकाे चाहना : समन श्रेष्ठ
१९ पुष २०७४, बुधबार १५:४८
नेपालमा भएको भौतिक र प्राकृतिक संरचनालाई पूर्णरुपमा परिचालन गरी एडभेन्चर र आउटडोरलाई विकास गर्न खोज्दैछु ।